Tsy voafetran'ny saina ny fiasan'Andriamanitra
"1 Dia namaly Zofara Namatita ka nanao hoe: 2 Noho izany dia mamaly ahy ny eritreritro, eny, noho ny fihetsiketsiky ny saiko. 3 Reko lalandava ny anatra mampahamenatra ahy; Ary ny fanahiko mamaly ahy avy amin’ny fahalalako. 4 Tsy fantatrao va fa hatramin’ny ela, eny, hatrizay nampitoerana ny olona tet? ambonin’ny tany, 5 Dia vetivety foana ny firavoravoan’ny ratsy fanahy, Ary indray mipi-maso monja ny fifalian’ny mpihatsaravelatsihy? 6 Fa na dia mipaka amin’ny lanitra aza ny hahavony, ka mitehika amin’ny rahona ny lohany, 7 Dia ho very mandrakizay toy ny dikiny ihany izy; Izay nahita azy dia hanao hoe: Aiza izy? 8 Manidina tahaka ny nofy izy ka tsy ho hita; Eny, ampandosirina tahaka ny tsindrimandry amin’ny alina izy. 9 Ny maso izay mijery, dia indray mitopy ihany no ahitany azy; Ary dia tsy hahita azy intsony ny fitoerany. 10 Ny zanany hitambitamby amin’ny malahelo, ary ny tànany ihany no hampody ny hareny. 11 Ny taolany dia feno ny herin’ny fahatanorana, Nefa hiara-mandry aminy eo amin’ny vovoka izany. 12 Na dia mamy ao am-bavany aza ny ratsy, ka afeniny ao ambanin’ny lelany, 13 Ary tsitsiny ka tsy foiny, fa tehiriziny ao amin’ny lanilaniny ihany, 14 Dia miova ny haniny ao an-kibony, ka aferon’ny vipera no ao anatiny. 15 Harena no nateliny, nefa aloany indray; Loaran’Andriamanitra hiala ao an-kibony izany. 16 Ny poizin’ ny vipera no hotsentsefiny; Hahafaty azy ny lelan’ny menarana. 17 Tsy ho faly mahita renirano izy, dia ony sy riaky ny tantely sy ronono. 18 Tsy azony atelina izay nikelezany aina, fa tsy maintsy hampodiny; Na dia be aza ny hareny, dia tsy ho araka izany ny hafaliany. 19 Fa nampahory sy nahafoy ny reraka izy ka naka trano an-keriny, fa tsy hahatontosa azy. 20 Satria tsy mahalala mionona ny kibony, dia tsy hahavonjy ny tenany mbamin’ny tiany indrindra izy. 21 Tsy misy tsy tratry ny fieremany; Ka dia tsy haharitra ny fiadanany. 22 Ho poriporitra izy, na dia mihoa-pampana aza ny fananany; Ny tanan’ny ory no hamely azy. 23 Halefan’Andriamanitra ny fahatezerany mirehitra hameno ny kibony; Eny, halatsany aminy toy ny ranonorana izany ho hanina ho azy. 24 Raha mandositra ny vy fiadiana izy, dia hahavoa azy miboroaka ny tsipìka varahina; 25 Tsoahany izany, ka mivoaka avy amin’ny tenany; Eny, ny manelatselatra dia mivoaka avy amin’ny aferony; Lasa izy azon’ny fahatahorana mafy. 26 Ny aizim-pito no voarakitra ho amin’ny raki-malalany; Afo tsy tsofina no handoro azy sady handevona izay sisa ao amin’ny lainy. 27 Hambaran’ny lanitra ny helony, Ary ny tany hitsangana hiampanga azy, 28 Ho lasa ny harena tafiditra ao an-tranony; Eny, ho levona izany amin’ny andro fahatezerany. 29 Izany no anjaran’ny ratsy fanahy avy amin’Andriamanitra, sy lova voatendrin’Andriamanitra ho azy." Joba 20:1-29
Valin’ny atao. Zofara dia resy lahatra fa ny valin’ny nataon’ny olona ratsy fanahy sy ny mpihatsaravelatsihy no mihatra amin’i Joba. Izao no tonga ao an-tsainy avy hatrany:
- Izay mety ho fahombiazana sy fahambonian’ny olona tahaka ireny, dia ho levona vetivety ihany.
- Izay rehetra mety efa nangoniny, ananany, hahitany fahafinaretana sy fahafaham-po dia esorina aminy, tahaka ny loharano hiala avy ao anatiny.
- Ny toetran’ireny dia mampahory ny hafa sy manao an-keriny, tsy mahalala onony amin’izany, mpierina (tsy tia manome hahasoa ny hafa)
- Loza no ho fiafaran’ny fananana sy fiainan’ireny.
Izany no efa hitan’i Zofara sy fahafantarany fa ataon’Andriamanitra, hatramin’izay nisian’ny olombelona teto an-tany.
Handray ny valin’ny ataony tokoa ny olona tsirairay.
Andriamanitra sy ny saina ary ny traikefa. Nahatsiaro tohina Zofara raha tsy neken’i Joba ny fanazavana nomen’izy sy ireo namany (3). Avy hatrany dia ny sainy no niasa hitadiavany izay hamaliana indray an’i Joba sy hanamarinana misimisy kokoa izay heveriny fa hany tena marina amin’izao zava-misy izao. Jereo ny toko 1 sy 2 momba izay tena marina.
Tsy azontsika ferana amin’izay fantatry ny saintsika sy ny efa traikefa ananantsika Andriamanitra amin’izay ataony sy hainy atao. Mahay manao mihoatra noho izay sainintsika sy heverintsika Izy. Tsy misy afaka mametra an’Andriamanitra amin’ny fomba, endrika, fotoana hanaovany izay tiany sy sitrapony.
- Mila mitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra isika fa tsy hionona amin’izay efa fantatsika fotsiny
- Mila mihaino mandrakariva ny fitarihan’ny Fanahy Masina isika mba tsy handehanana amin’izay masaka ao an-tsaina fotsiny.